Zithini iimpawu zethekhnoloji yoTyalo mali?
Imveliso yokulahla ngokuchanekileyo kutyalo-mali inezibonelelo ezininzi, kodwa ikwanazo nezinto ezingalunganga zeenkqubo ezininzi, inkqubo entsonkothileyo, umjikelo wemveliso ende, kunye nezinto ezininzi ezichaphazela umgangatho wokuphosa, othintela ukusetyenziswa kunye nophuhliso lokuphosa ngokuchanekileyo ...
Ukuchaneka kwe-CNC yinkqubo yokuvelisa ethabathayo apho isiqwenga semathiriyeli ekrwada sinqunyulwa saba yinxalenye yokugqibela oyifunayo kusetyenziswa ulawulo lwamanani lwekhompyuter. Ukuchaneka kwe-CNC kwaba ngumgangatho womzi mveliso ngasekupheleni kweminyaka yama-1960 kwaye ihleli iyindlela ekhethwayo yokuchola unanamhla. CNC machining yi manuf ...
Ukuphoswa kwesinyithi ngeCarbon
Intsimbi yeCarbon yinto eyaziwayo kuluhlu olubanzi lwezicelo. Ayibizi mali ininzi, ifumaneka ngokulula kumabanga amaninzi, kwaye inokunyangwa ngobushushu ukuphucula amandla ayo, ukungasebenzi kakuhle, kunye nokusebenza kakuhle. I-Dongying Shengyu Imveliso yeMveliso Co.Ltd., Ibonelela ngentsimbi yekhabhoni ephezulu kunye ne-alloy ephosiweyo ephantsi ...
Utyalomali oluGqwesileyo oluNgcono ngeSinyithi eChina
Dongying Shengyu Metal Product Co., Ltd Foundry ligxininisa kwimveliso yotyalo-mali eyahlulayo iinxalenye pump steel stainless, izahlulo vana, izincedisi motor, izahlulo auto, impellers, izixhobo zokwakha, izixhobo umbhobho, iindawo ipolishi njl cast cast steel stainless kunye nezinye ngqo eyahlulayo utyalo. ..
Umgangatho weSiseko seNdawo yokuFunda ubhekisa kuMgangatho wokuPhosa
Kuba Foundries, ekumgangatho ophezulu eyahlulayo ukungunda oko kuthetha, oko kuthetha iindleko eziphantsi, imveliso ephezulu kunye neenzuzo. Okwangoku, ishishini sokubumbela lwasekhaya liphuhlise ngokukhawuleza, kuphela isityalo se-aluminium sokukhupha isityalo esiya kuba ngaphantsi kwamakhulu, kunye nophuhliso lweshishini leemoto kunye ...
Ngaba Uyazi ukuba ngomphezulu oQhelekileyo weeNxalenye zokuSebenza usetyenziselwa i-Hardware Hardware?
Ukusebenza kwe-Hardware ngumsebenzi ocolekileyo, ukwenziwa kwe-Hardware kunokubizwa ngokuba kukusebenza kwesinyithi, apho umphezulu weendawo zokulungisa unokwahlulwa-hlulwa ube ziindidi ezininzi, ezinje ngokulungiswa kwentsimbi, ukupeyinta intsimbi, ukwenza electroplating, ukucola komhlaba, isinyithi. ..